कोरियामा ठगिएका गुनासा हरु बग्रेल्ती , कसरी ठगिन्छन् नेपालीहरु ? – Kamdardainik
१६ आश्विन २०७८, शनिबार १६ आश्विन २०७८, शनिबार Santosh Khadka	0 Comments
केही बर्ष पहिला तत्कालिन एन. आर. एन. ए. कोरियाका सचिब सोगेन्द्र घले करोडौ रुपैया ठगेर फरार भए ।गैरकानुनी मानिएको हुन्डी कारोबार गर्ने घले ले सयौ नेपाली कामदार सग करोडौ रुपैया उठाएर बेपत्ता भए । उनको अहिले सम्म अत्तोपत्तो छैन । त्यतिबेला अहिले जस्तो कुनै पनि रेमिट्यान्स कम्पनीहरु स्थापित थिएनन् । दुख गरेर कमाएको पैसा नेपाल पठाउन कि त अत्यन्तै महँगो शुल्क तिरेर झन्झटिलो माध्यम मानिने बैंक बाट पठाउनु पर्थ्यो कि त ‘राम भरोसा’ सम्झेर हुन्डीवाला का हातमा थमाइदिनु पर्थ्यो । धेरै नेपाली हरुले ‘राम भरोसा’ सम्झेर गैरकानुनी भएता पनि हुन्डीवाला कै हातमा थमाइदिने गदर्थे । त्यसको फाइदा उठाउदै सोगेन्द्र घले ले सयौ नेपालीको पसिना सजिलै खान सफल भए ।
कोरियामा सोगेन्द्र घले एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् ।पछिल्लो समय विभिन्न शिर्षकमा ठगिएका गुनासाहरु समाजिक सन्जाल भरी छरपस्ट भेटिन्छन् । कोरिया प्रबेश गरे पछि अधिकाम्श नेपाली हरुको मनमा राष्ट्रियता जागेर उथल पुथल हुन्छ । हुन पनि आफ्नो देश छाडे पछि कसको मनमा पो राष्ट्रियता जाग्दैन र ! मनमा राष्ट्रियता नहुने नागरिक कस्तो हुन्छ ? यी स्वाभाबिक कुराहरु नै हुन् ।
यस्तै यस्तै कुरा सोच्दै जादा कुनै अमुक ब्यक्ति विभिन्न परियोजना लिएर उक्त मजदुरको अगाडि आइपुग्छ । उसले देश पनि समृद्ध हुने र आफू पनि आर्थिक रूपमा सक्षम हुने अनेकन खाकाहरु प्रस्तुत गर्छ । भाबनामा बहकिएर बसेको मजदुर उसको कुरामा बिश्वास गर्छ । अनि दुई/चार महिनाको तलब सजिलै सुम्पन तयार हुन्छ । कोरियामा ठगिने शिलशिला को बिन्दु यहि बाट शुरु हुन्छ ।
क-कस्ले ठगे ?
यहि सौल बुसान ‘ख्यङ्बोक’ राजमार्गको बारेमा देखेका / सुनेका नेपाली हरु काठमाडौ-हेटौडा सुरुङ मार्ग को डिजिटल प्लान र आर्थिक लाभका फोस्रा कुराहरुले आकर्षित भए । यो परिजोनका निमित्त केही नेपालीहरुले कोरिया बाट लगानी पनि गरे तर आज यो परियोजनाको नामोनिशाना छैन । जबाफदेहिता पनि कोहि सग छैन । लगानिकर्ता हरु सिधै ठगिए ।
ठगिका बिषयमा के भन्छ कोरियाको कानुन ?
यो पंक्तिकार ले ख्वाङ्जु प्रहरी का एक अधिकृत सग जिज्ञासा राख्दा कुनै पनि ठगिका बिषय हरु लिखित रुपमा उजुरी परे छानबिन हुने बताउछन् । ठगी र भस्ट्रचार जस्ता आर्थिक मामलाका बिषयमा कोरियाको कानुन अत्यन्तै कठोर रहेको समेत उनेको भनाइ छ । केही समय अगाडी मात्र एक कम्बोडियन नागरिक माथी परेको ठगीको बिषयमा उनले ठूलो दण्ड बेहेर्नु परेको कुरा समेत स्मरण गरे । यस्ता बिषयमा सबै भन्दा पहिला आफु नै सचेत हुनुपर्ने उनको सुझाब समेत छ ।
← बैंकिङ कसुर मुद्दामा १० लाख जरिवाना भएका व्यक्ति पक्राउ
साताको शेयर बजार : २६ अर्ब बढीको कारोबार →